Articles tagged 'zimbabwe national water authority'
Zinwa sues perm sec, MP over water bills 26 June 2018 HARARE - The permanent secretary in the Office of President and Cabinet, Boniface Chidyausiku and Zanu PF Member of Parliament for Bindura North Kenneth Musanhi have been dragged to the High Court for failing to pay their water bills to the Zimbabwe National Water Authority (Zinwa). Zinwa has ...
Rains shore up water levels in dams 21 May 2018 HARARE - Zimbabwe's national dam levels continue to rise consequent to the rains experienced across the country this season. According to the Zimbabwe National Water Authority (Zinwa), dams such as Mazvikadei, Chivero and Siya are now more than 100 percent full with Manyuchi, Sebakwe, Mtshabez...
Farmers cry foul over water theft 6 October 2017 HARARE - The Zimbabwe National Water Authority (Zinwa) is struggling to contain rampant illegal water abstraction along rivers and irrigation canals in the Lowveld, resulting in the parastatal losing substantial revenue. According to the Water Act (2002), all individuals, organisations and com...
Rautenbach's company owes Zinwa $2,5m 4 August 2017 HARARE - Business tycoon Billy Rautenbach's Macdom and Rating company owes the Zimbabwe National Water Authority (Zinwa) $2,5 million in unpaid water bills. The debt is for irrigation water Zinwa supplied to Macdom and Ratings' huge sugarcane plantations in Chisumbanje and Middle Sabi areas. ...
Pre-paid water meters for councils: Zinwa 2 May 2017 HARARE - The Zimbabwe National Water Authority (Zinwa) has decided to roll-out prepaid water meters to all local authorities, as part of measures to escalate revenue collection. Water minister Oppah Muchinguri-Kashiri said Zinwa will be in charge of the exercise. This comes as most local au...
Borrowdale floods saga takes new twist 1 February 2017 HARARE - The Borrowdale flooding case has taken a new twist, with the Zimbabwe National Water Authority (Zinwa) saying the privately-owned dam that led to the disaster after it spilled was illegally constructed. This comes as the Environmental Management Authority (Ema) has also said that the ...
'Zim's water budget too low' 19 January 2017 HARARE - The Zimbabwean government has come under fire after allocating a paltry $16,4 million for water and sanitation programmes over the next financial year, a sum which environmental experts said is woefully inadequate given the size of the country and the health challenges it faces. Finan...
Zinwa water expensive: Parly 19 September 2016 HARARE - The Zimbabwe National Water Authority (Zinwa) makes it very difficult for local authorities to provide effective services due to their steep raw water prices, chairperson of the parliamentary portfolio committee on Local Government Irene Zindi said. Speaking at a Combined Harare Resid...
Chances of flooding low: Zinwa 19 January 2015 HARARE - The Zimbabwe National Water Authority (Zinwa) said chances of flooding in the flood-prone areas of Zimbabwe are very low at the moment with the national dam levels remaining at 78,5percent. A hydrologist with Zinwa, Deborah Musiiwa revealed this when she presented a paper at a meetin...
Zinwa charges must be minimal — Chinotimba 24 July 2014 HARARE - Joseph Chinotimba, the Buhera South Zanu PF Member of Parliament (MP), has queried why Zimbabwe National Water Authority (Zinwa) was charging water that it gets from the Zambezi River’s catchment area for free. Contributing to debate on government’s policy on agricultural financing on...
Zinwa mum on Mtshabezi tariffs 28 January 2014 BULAWAYO - The Zimbabwe National Water Authority (Zinwa) is yet to disclose its charges to Bulawayo City Council ever since the local authority started drawing water from Mtshabezi Dam last year. Initially, the parastatal, which is in charge of bulk water, had indicated it would not charge cou...